महिनावारीलाई सरकारको नीतिमा समावेश गर्नुपर्छ |
प्रकाशित मिति :2018-05-28 17:16:02
यस वर्ष सरकारी स्तरबाटै महिनावारी स्वच्छता दिवस मनाइदै छ ? यो दिवस मनाउन किन आवश्यक देख्नुभयो ?
महिनावारी एउटा सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो । एउटा स्वस्थ किशोरीको निश्चित उमेर, अवस्था पुगेपछि यो प्रारम्भ हुन्छ । निश्चित अवस्था पुगेपछि स्वतः बन्द हुन्छ । तर महिनावारीका विषयमा संस्कार, परम्परा, धर्म, व्यवहार जोडिएको छ । योसँग सम्बन्धित गलत धारणाहरू, परस्पराहरू, संस्कारहरू विद्यमान छन् ।
सृष्टिको लागि नभई नहुँने प्राकृतिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा महिलाहरूले उल्टै समस्या भोग्नु परेको अवस्था छ । त्यसलाई तोड्नुपर्ने देखिन्छ ।
समाजमा व्याप्त कुरीति, कुसंस्कारलाई न्यूनिकरण गर्दै महिनावारी एउटा सामान्य, मर्यादित आवश्यक प्रक्रिया हो भन्ने जनचेतना जगाउनु, यसमा संलग्न सबै पक्ष, सरोकार निकाय, संघ संस्थालाई ध्यानकर्षण गर्ने सरकारको उद्देश्य हो । त्यसैले यो दिवस सरकारी स्तरबाटै मनाउन लागिएको हो ।
महिनावारी स्वच्छता भन्नाले के बुझ्ने ?
महिनावारी स्वास्थ्य, सरसफाईसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै सामान्य प्रक्रिया हो भनेर समाजमा स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ । त्यहि अनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन, जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।
महिनावारीसँग जोडिएका हाम्रा केही परम्परागत गलत संस्कारहरू छन् । जस्तै महिनावारी हुँदा छुट्टै बस्नुपर्ने, केही छुन नहुँने, खानेकुरामा पनि बन्देज गर्ने, सामाजिक कार्यहरूमा सामेल हुन नपाईने जस्ता सामाजिक नीति नियम छन् ।
अर्को स्कुलको कुरा गर्दा किशोरी छात्राहरूको लागि छात्रामैत्री शौचालयको अभाव हुने र महिनावारीको कुरा खुलेर व्यक्त गर्न नसक्ने, पढाइ समेत छोड्नुपर्ने अवस्था छ । यी र यस्तै महिनावारीसँग जोडिएका यावत् समस्याहरू छन् । त्यसलाई विस्तारै व्यवस्थित गर्दै लैजाने, हटाउँदै लैजाने उद्देश्यले महिनावारी स्वच्छता दिवस सरकारी स्तरबाटै मनाइएको हो ।
महिनावारी स्वच्छताको बारेमा राजधानी र जिल्ला सदरमुकाममा हुने औपचारिक कार्यक्रमले दुरदराजमा परिवर्तन होला त ?
महिनावारीलाई हेर्ने धारणा हाम्रो देशमा मात्र नभई, अन्य देशहरूमा समेत कुनै न कुनै रुपमा कायमै छ । नेपालमा कुनै धर्म मान्नेमा बढी छ भने कुनैमा कम छ । यस्तै जातजाती अनुसार पनि फरक छ । जाती समुदायमा बढी र कुनैमा कम रहेको पाइन्छ । यसको नकारात्मक असर सबै क्षेत्रमा छ । सरकारले राष्ट्रव्यापी रुपमा सुधारका कार्यक्रमहरू, सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ र हामीले यस्ता कार्यक्रम गर्छौ पनि ।
एक दिन दिवस मनाएर मात्रै सबै हुने होइन । खाली यो दिवस अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा महिनावारी दिवस मनाउने प्रचलन अनुसार यहि दिनलाई चयन गरेर नेपालमा पनि मनाउन लागिएको हो । कार्यक्रमले सम्वन्धित सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउने मुख्य उद्देश्य हो ।
दिवस मनाउँदैमा सबै परिवर्तन भई हाल्ने भन्ने होइन । त्यसैले यसमा नियमित कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । महिनावारीलाई सरकारका नीतिहरूमा समावेश हुनुपर्छ । त्यहि अनुसारका कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुनुपर्छ । सोही अनुसारको स्रोत, साधन विनियोजन हुनुपर्छ । यसका धेरै पक्ष छन् । सबैको ध्यानाकर्षण गर्ने मात्रै यस्ता दिवसहरूको उद्देश्य हो ।
ग्रामीण भेगमा अझै पनि महिनावारीका विषयमा थाहा नहुँदा धेरै महिलाहरू समस्यामा छन् । त्यस्तो ठाउँमा प्रचार प्रसार गर्नुभएको छैन ?
नेपालमा पहिलो पटक सरकारी तबरबाट यो दिवस मनाउँदैछौ । नेपालको संविधानले प्रजनन् सम्बन्धी हक, स्वास्थ्य सम्बन्धि हक, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूत गरेको छ ।
स्वच्छ जीवन बाँच्नका लागि चाहिने हकहरू पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसले स्वच्छ जीवन बाँच्नका लागि चाहिने अधिकारहरूको उपलव्ध गराउँने र पहुँच पु¥याउने राज्यका दायित्व हो ।
संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नेपालले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरू, पक्ष राष्ट्रहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसको पक्ष राष्ट्र बनेको छ । त्यसमा प्रतिवद्धता गरे अनुसार पनि हासिल गर्न आवश्यक छ । अर्को हामीले ग्रामिण तहमा पनि महिनवारीका विषयमा प्रचारप्रसार गरिराखेका छौं ।
तपाईहरूले महिनावारी सम्बन्धी नीति बनाउनुभएको छ ? त्यसमा कुन कुन विषय समेट्नुभएको छ ?
यो नीति अहिले तर्जुमाको क्रममा छ । त्यो अहिले स्वीकृत भईसकेको छैन् । पहिलो मस्यौदा तयार भएको छ । छलफलको क्रममा छ । चाँडै नै यस नीति पारित गर्नेतर्फ खानेपानी मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
यस नीतिमा महिनावारी अन्धविश्वास, कुरीति, धर्म, परम्परा, संस्कृतिसँग जोडिएको हुनाले धर्म गुरुहरूलाई समेत यस विरुद्ध परिचालन गर्दै लैजाने, विभिन्न सार्वजनिक संघसंस्था, स्कूलमा महिलामैत्री शौचालय निर्माण गर्दै गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ ।
तपाईहरू काठमाडौंमा बसेर नीति बनाउनुहुन्छ ? तर गाउँगाउँमा त नीतिको बारेमा केही थाहा हुँदैन नि ?
पहिला नीति पारित हुनुप¥यो । त्यसको प्रचारप्रसार, कार्यान्वयन र अवलम्वनको क्रममा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म अर्थात अहिले संघीय सरकार प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकारको तीन तहको प्रमुख भूमिका रहन्छ ।
यी तीनै तहमा हामी महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी नीतिलाई प्रचारप्रसार गछौं । अवलम्बनको लागि पठाउँछौ । सबै तह, सरोकारवाला परिचालन नभई यो कार्यान्वय हुन सक्दैन ।
मुलुकी अपराध संहितामा पनि महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनेको छ । उक्त कसूर गर्ने व्यतिmलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनिएको छ । छोरी अथवा महिलाहरूले आफन्तकै विरुद्धमा उजुरी दिन सक्लान त ?
हामीले नीति, नियम, ऐन कानूनहरू तर्जुमा गर्दै र कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ । कानूनले मात्र हुने भए त सबै समस्या समाधान हुन्थ्यो । त्यसैले यो जटिल विषय छ । यो धर्म, सँस्कृति, परम्परासँग जोडिएको छ । व्यवहारसँग जोडिएको छ । त्यसैले यो विषयलाई समुदायमा चेतना अभिवृद्धि गर्दै, व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
यो कठिन पनि छ तर असम्भव छैन । यो अभियानको रुपमा सरोकारवालाहरू एक जुट भएर अगाडि बढ्यो भने यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यहि रुपमा कार्यक्रम पनि गर्छौं ।
(खनाल खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।) प्रस्तुती सन्दिप वि.क